सत्तारुढ दल फुट्दा विपक्षी/विरोधीलाई रमाइलै लाग्ला – Our News Crew
सत्तारुढ दल फुट्दा विपक्षी/विरोधीलाई रमाइलै लाग्ला
सत्तारुढ दल फुट्दा विपक्षी/विरोधीलाई रमाइलै लाग्ला । जनस्तरले पनि ठीक प¥यो, खुच्चिङ भन्ला । तर, अपार जनमत प्राप्त दलको विभाजनले व्यवस्थाप्रति नै बढ्न थालेको निरासालाई बल दिनेछ । गुटगत शक्ति संघर्षले मक्किएको नेकपाको कुर्सी हानाथापका कारण गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने ! यो हुनै सक्दैन । जारी प्रतिरोधको लडाईं अन्त्य गरेर बिगतका अनेकौं गल्ती कमजोरीप्रति क्षमायाचना गर्दै नेकपा सच्चियोस् । त्यसका लागि :
१. दोस्रो तहका नेताकै बलमा ओली, दाहाल र नेपालको चुरिफुरी बढेको हो । त्यसैले पार्टी एकताको पक्षमा नलाग्ने हो भने अब काँध थाप्दैनौं भन्ने स्पष्ट चेतावनीका साथ दोस्रो तहका नेताले आ–आफ्नो समूह (गुट) त्यागेको घोषणा गर्ने । र, तीन वटै गुटका दोस्रो तहका नेताले एक भएर स्थायी कमिटीको जारी बैठक अन्त्य गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन लगाउने । केन्द्रीय कमिटी बैठकले अन्तरिम विधानमा जे सुकै व्यवस्था भएपनि निम्न काम गर्ने :
(क) समन्वयको लागि बनाए पनि अनाधिकृत कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर शक्ति संघर्षको थलो बनेको सचिवालय खारेज गर्ने ।
(ख) बामदेव गौतम संयोजक र रामबहादुर थापा सह–संयोजक रहने गरी हालको स्थायी कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने । महाधिवेशनको मिति तोक्ने ।
(ग) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई महाधिवेशन आयोजक समितिको सल्लाहकार बनाउने । नाइनास्ती गरे बहुमतले पेलेरै जाने ।
(ग) महाधिवेशन आयोजक समितिका सल्लाहकार (शीर्ष ४ नेता) र सदस्यबाहेक हालको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि चुनिएरै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने ।
(घ) अधिवेशन, महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरिने छ भनेर केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गराउने । यसले मिश्रित नेतृत्व निर्वाचित गर्न सहयोग पु¥याउँदा पूर्व पार्टीको धङधङी हटाउन बल पु¥याउने छ ।
(ङ) यिसहित बाधा–अड्काउ फुकाउनु पर्ने अन्य आवश्यक निर्णय गरेपछि केन्द्रीय कमिटी पनि भंग गर्ने ।
(२) हालसम्मको गल्ती/कमजोरीका लागि आत्मालोचना गर्न लगाएर, आइन्दा पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समितिका सल्लाहकार (शीर्ष ४ नेता) सँगको सल्लाह/परामर्शमै सरकारलाई थप चुस्त, दुरुस्त बनाउने गरी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने ।
(क) शीर्ष नेताकै सल्लाहअनुसार वर्तमान शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्ने । प्रधानमन्त्रीले सचिवालय हेरफर गर्ने ।
(ख) प्रधानमन्त्री सरकार र शीर्ष नेता महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने । महाधिवेशनमा विचार र नेतृत्वका लागि संघर्ष गर्ने ।
गुटगत स्वार्थ त्योगेर तीन वटै (ओली,दाहाल, नेपाल) समूहका दोस्रो तहका नेता एकै ठाउँमा उभिए भने तिनले शीर्ष नेतालाई ‘नथ्थी’ लगाउन सक्छन् । त्यो बेला आएको छ । शीर्षको स्वार्थले विभाजित हुन लागेको नेकपालाई एकतावद्ध बनाउने जिम्मेवारी दोस्रो तहका नेतामा आएको छ । जिम्मेवारी पूरा गरुन् । जुनसुकै दल विभाजित हुनु भनेको लोकतन्त्र थप कमजोर बन्नु हो ।
पोखारामा दुई मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्किदा जे भयो (भिडियो सहित)